Cumar C/rashiid oo Sheegay inuu yahay Weli Ra’isulwasaaraha Soomaaliya (Sawiro iyo Cod) • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Cumar C/rashiid oo Sheegay inuu yahay Weli Ra’isulwasaaraha Soomaaliya (Sawiro iyo Cod)
Cumar C/rashiid oo Sheegay inuu yahay Weli Ra’isulwasaaraha Soomaaliya (Sawiro iyo Cod)
May 18, 2010 - By: Abdirahman. A
Raâ€™iisal Wasaare Sharmarkeâ€œAniga iyo madaxweynaha waan is aragnay waxaan u cadeeyay in aan istiqaalo keenin, caqlabiyad baarlaamaana aan codka lagala noqon Xukuumada, Xukuumaduna ay tahay mid sharci ahâ€
Shir jaraaâ€™id oo uu Xafiiskiisa ku qabtay Raâ€™iisal Wasaaraha Xukuumada FKMG ah Cumar Cabdirashiid Cali Sharmarke ayuu ku gacan seyray kala diristii Madaxweynaha ku sameeyay shalay Xukuumada isagoo sheegay inaan loo marin wado sharci ah.
Raâ€™iisal Wasaaraha ayaa saxaafada la hadlay kadib kulan ay isugu yimaadeen xubnaha golihiisa Wasiirada oo iyagu soo xaadiray madasha shirka saaka, wuxuuna sheegay in dood iyo falanqeyn dheer kadib ay isla garteen in xukuumada ay tahay weli mid dhaqangal ah isla markaana shaqeyneysa.
â€œWaad u jeedaan dhamaan xubnihii Golaha Wasiiradu wey fadhiyaan, sideedii ayayna u shaqeyneysaa xukuumadu waana sharciâ€ ayuu yiri Mr. Sharmarke oo xusay in xukuumadiisa ay kalsoonida siiyaan xubnaha golaha Baarlamaanka, waxaana ridi kara Baarlamaanka oo codkii kalsoonida kala laabtaâ€ ayuu mar kale yiri.
Raâ€™iisal Wasaaraha ayaa cadeeyay in xalay isaga iyo madaxweynaha ay is arkeen isla markaana uu u sheegay in xukuumadiisu sharci tahay wuxuuna yiri â€œAniga iyo madaxweynaha waan is aragnay waxaana u cadeeyay in aan istiqaalo keenin, caqlabiyad baarlaamaana aan codka lagala noqon Xukuumada, sidaasi darteedna ay Xukuumadu tahay mid sharci ahâ€.
Dhegayso warka Raysalwasaare Sharmarke [powerpress]
Sidoo kale, wuxuu si toos ah u soo hadal qaaday talaabadii Aadan madoobe oo ahaa guddoomiyihii Baarlamaanka isagoo xusay in haddii uu meel maro warka Aadan madoobe ee ahaa inay xukuumadii dhacday ay noqon doonto jid, guddoomiye kasta oo Baarlaamaanka oo la doortona uu inta gurigiisa ku qabto shir jaraaâ€™id oran doono madaxweynihii waan ridnay, baarlamaankii waan ridnay.
â€œMadaxweynuhu xaq uma lahan inuu kala diro xukuumadaâ€ ayuu mar kale ku celiyay.
Dhinaca kale, Yuusuf Maxamed Siyaad Indhacadde aya isaguna ka soo dhex muuqday kalfadhigii manta ee xubnaha Golaha Wasiirada, isagoo aan la hadlin wax saxaafad ah.
Kooramka shirka golaha Wasiirada oo ah 14 Wasiir ayaa waxaa kulanka ka soo qeyb galay 20 Wasiir iyadoo inta badana Wasiiradu ay safaro shaqo uga maqan yihiin dalka gudihiisa.
Tagged With: Raysalwasaare Sharmarke